TheAwards: Amabhaso ngeyona midlalo mihle kunye neeapps eziselfowuni eSpain ngo-2018 | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Imidlalo ye-Android, Izaziso, Tutorials
Nge-15 kaNovemba ngo-Epreli XNUMX kuya kubanjwa ushicilelo lokuqala lwamabhaso eTheAwards. Ngumnyhadala wokuhanjiswa apho kufunwa ukuqaphela ezona zicelo zibalaseleyo kunye nemidlalo ye-Android kunye ne-iOS, ikomkhulu labo liseSpain. Isinyathelo esazalwa sivela kwi-arhente ye-app yokuthengisa, i-PickASO kunye nesixhobo, isixhobo sokulungiselela iVenkile ye App.
Kolu hlelo lokuqala lwamabhaso eTheAwards Sifumana iindidi ezili-11 zizonke. Amabhaso afikelela kwi-150.000 ye-euro iyonke kwiindidi ezili-11 apho kuya kubakho ukhuphiswano. Iindidi ngeendidi, ukuze la mabhaso afikelele kwizicelo ezininzi kangangoko kunokwenzeka.
Sizifumana sikudidi lwendlovukazi, esona sicelo sisemagqabini eSpain ngo-2018. Ngowona mvuzo mkhulu bonke abanqwenela ukuthatha inxaxheba kuwo. Ukongeza kweli bhaso, sinabanye ngezona zicelo zibalaseleyo kwicandelo labo, lahlulwe ngokwamacandelo ahlukeneyo, la: Ukuthenga; Uqoqosho, ishishini, elezimali kunye neleshishini; Ukuzonwabisa, Iziganeko neMozulu; Ukuyila kunye neMveliso (Ifoto, iVidiyo, uMculo, ubuGcisa kunye noYilo, iiapps ze-AR, ukuvelisa, izixhobo, izixhobo, ukuzenzela); Impilo ntle kunye neMidlalo (iMpilo, ukuPhila, iMithi, iMidlalo); Ukuhamba (Ukuhamba, ukuHamba, ukuKhangela, iiMephu, ukuZenzekelayo kunye neeMoto); Imfundo neeMagazini (Imfundo & nokuba ngumzali, iiComics, iincwadi, iindaba, iimagazini kunye namaphephandaba); Indlela yokuphila (Indlela yokuphila, Ubuhle, Ukutya neziselo, iNdlu neKhaya); IiNethiwekhi zeNtlalo, ukuDibana noNxibelelwano kunye neMidlalo.
Abaphumeleleyo baya kufumana njengebhaso iphakheji ebandakanya iinkonzo ezivela kwiinkampani ezinje ngeeNkonzo zeWebhu zeAmazon, PickASO, Isixhobo okanye iAppApp samurai, phakathi kwabanye. Amanye amabhaso anokukhuthaza ezi nkampani. Isixa sexabiso samabhaso sifikelela ngaphezulu kwe-150.000 ye-euro, okwangoku, njengoko inokunyuka.
1 Ungayithatha njani inxaxheba kwi-TheAwards?
3 UMBUTHO kunye neTheward
Ungayithatha njani inxaxheba kwi-TheAwards?
Ukuba unomdla wokuthatha inxaxheba kolu khuphiswano kwaye ke uphumelele ibhaso kulo msitho we-TheAwards, kuya kufuneka uhlangabezane neemfuno ezimbalwa ukuze ukwazi ukuthatha inxaxheba kula mabhaso. Kwelinye icala, usetyenziso okanye umdlalo kufuneka ubeneofisi ebhalisiweyo eSpain, isitudiyo sokuyila kufuneka sibe nayo. Yintoni egqithisile, ukhuphelo lolo siceloNokuba ikwiVenkile ye App, Dlala iVenkile okanye zombini, kufuneka idlule kwi-5.000.
Ukuba uyazifezekisa ezi mfuno zimbini, ungathatha inxaxheba kwiTheAwards. Ukwenza oku, kuya kufuneka ugcwalise le fom ukuze ukwazi ukuthatha inxaxheba. Ukuthatha inxaxheba kula mabhaso akukho ndleko kubo nabaphi na abathathi-nxaxheba. Xa ifayile yefayile ikule nto KwiwebhuLixesha lokuba ukhuthaze umgqatswa wakho. Uya kuba noNovemba 12 ukwenza njalo.
Ezona zicelo zintathu zivotelweyo kudidi ngalunye ziya kuba ngabokugqibela. Ke kuyakubakho izicelo ezingama-30 zizonke kulo msitho wamabhaso.
Ijaji iya kukhetha ophumeleleyo kudidi ngalunye kunye nolunye kwicandelo lolona hlelo lubalaseleyo eSpain ngo-2018. I-Theways izakubanjwa nge-15 kaNovemba eBarcelona, ​​ukuqala nge-18pm eDuvet Club Barcelona (c / Còrsega 327). Umsitho obhiyozelwayo Ngexesha le-ORGANIC apps party.
Amalungu ejaji sele ebonakalisiwe yomsitho, oza kuba ngu: UVanessa Estorach, umseki-mbumba wabaseTyhini kwiFowuni; U-Evgeny Predein, u-CEO we-Apiumhub; U-Elia Méndez, uMlawuli Jikelele we-Mobile Marketing Association eSpain (MMA Spain); UThomas Petit, iLungu leQela lokuKhula kwi-8fit app kunye noRicard Castellet, COO e-Barcelona Tech City.
UMBUTHO kunye neTheward
Umsitho wamabhaso emidlalo yinxalenye yeqela lezinto zokusebenza, esele ibhiyozela uhlelo lwayo lwesine kulo nyaka. Ngaphambi kokuba ii -apps eziphumeleleyo zityhilwe, abantu abazokuzimasa baya kuba nakho ukuya kwiintetho ezahlukeneyo, ezine zizonke, kumabali okuphumelela kwesoftware. Izithethi zeentetho ezixeliweyo ziya kuba zezi: Andrea Vian, iNkokeli yeQela le-SEM kunye neNtloko yeNtengiso yeFowuni e-eDreams ODIGEO kunye no-Anna Juan, uMphathi weNtengiso eScoot.
Emva kwezi ntetho kunye nomsitho wamabhaso, kuzobanjwa ithekoUmsebenzi -nokusebenza kweeapps. Ke lithuba elihle lokwazisa ngesicelo sakho okanye kwinkampani.
Ukuququzelela i-ORGANIC kunye ne-TheAwards yenziwa ukuba ixhaswe ngabaxhasi abanjengoAmazon Web Services, Infojobs, Headway, kunye neAppleFlyer. Ukongeza ekusebenzisaneni nabo abaninzi kumnyhadala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » ITheward: Amabhaso ngeyona midlalo mihle yeselfowuni kunye nokusetyenziswa eSpain ngo-2018
Nge-WhatsApp ngoku ungadlala iividiyo kwiifestile ezidadayo zeYouTube, Facebook naku-Instagram